Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Dutch Ryan Gravenberch Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Anyị Biography nke Ryan Gravenberch na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata, akụkọ mbido, ndị nne na nna, ezinaụlọ, enyi nwanyị / nwunye ka ha bụrụ, Ndụ (arsgbọ ala), Net Worth na Personal Life.
Na nkenke, anyị na-ewetara gị nkenke Ndụ Akụkọ nke ndị na - agba ọsọ Dutch - site n'oge ọ bụ nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama.
Iji mee ka ị nụ ụtọ ọdịdị nke ndụ Ryan Gravenberch, nke a bụ nchịkọta ihe atụ nke oge mmalite ya ruo ntorobịa. O doro anya na ọ na-akọ akụkọ.
Ryan Gravenberch Life Akụkọ na foto.
Ọ bụrụ na ị maghị, Ryan Gravenberch na-akpọ ya 'Paul Pogba-dị ka' Ajax wonderkid. Onye ọ bụla maara na ọ bụ nnukwu onye ọkpọ ọkpọ nke a maara maka mmerụ ya, n'èzí ụkwụ ya na nka ya.
Agbanyeghị, anyị chọpụtara na ọ bụ naanị mmadụ ole na ole gụrụ otu akụkọ dị mkpirikpi banyere akụkọ ndụ ya. Anyị akwadebela ya naanị maka gị na enweghị mgbatị ọzọ, ka anyị bido.
Ryan Gravenberch Nwatakiri Akụkọ nke:
Maka Biography Starters, ọ na-aza aha 'Emeka Nwankwo. Ryan Jiro Gravenberch a mụrụ na 16th ụbọchị nke May 2002 nne ya, Aretha na nna, Ryan Gravenberch (Sr) na obodo Amsterdam, Netherlands.
Luis Suarez Ụmụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu na-enweghị isi
Ọ bụ ọdụdụ nwa n'etiti ụmụnne abụọ amụrụ site na njikọ dị n'etiti nne na nna ya.
Zute nne na nna Ryan Gravenberch. Nwanyị mara mma na-eto eto na nna mara ezigbo mma.
Onye Dutch na-eme egwuregwu nọrọ afọ nwata ya na nwanne ya nwoke nke okenye, Danzell Gravenberch na obodo amụrụ ya na Amsterdam. Na-etolite n'isi obodo (nke bụ ebe obibi nke Johan Cruijff Arena), football bụ egwuregwu Ryan na nwata na ihe nketa ya.
Ryan Gravenberch Ezigbo Ezinụlọ:
Ikekwe ị maghị, nwa amaala Amsterdam si n'ezinụlọ na-eri ma na-a footballụ football.
Lassina Traore Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
N'ezie, nne na nna Ryan Gravenberch abụọ bụbu ndị egwuregwu bọọlụ ebe nwanne ya nwoke nke okenye Denzel sonyekwara n'egwuregwu bọọlụ dịka egwuregwu nwata.
Site na mmalite, ọ bụ football ma ọ bụ ihe ọ bụla maka ezinụlọ Gravenberch dị n'etiti. N'ihi ya, ma Danzell na Ryan nwere obi ụtọ ịnabata akara aka ha n'aha ibi ndụ nrọ nke nna ha na papa ha.
Foto a na - adịghị ahụkebe nke Ryan Gravenberch na nwanne ya nwoke nke okenye, Danzell.
Ryan Gravenberch Ezinụlọ:
N'ime oge ị na-ahụ ya ka ọ na-egwuri egwu, ọ ga-abụrịrịrịrịrịrị na ị jụrụ… onye bu nwoke a!. Ee!… Anyị niile mara na ọ bụ Dutch. Ma na-ekpe ikpe site na agba akpụkpọ ya, mụ na gị maara ezinụlọ Ryan Gravenberch nwere mgbọrọgwụ B NOTGH from si Holland, mana ebe ọzọ.
Ihe mbu, ya abughi onye Afrika. Ndị nne na nna Ryan Gravenberch sitere na Suriname, obere mba dị n'ụsọ oké osimiri ọwụwa anyanwụ nke Ebe Ndịda America.
N'agbanyeghị mgbọrọgwụ ya, obodo Amsterdam (dị ka a hụrụ n'okpuru ebe a) ga-abụ ezigbo ụlọ ya ruo mgbe ebighị ebi.
Akụkọ Na-adịghị Agbanwe Akụkọ nke Ryan Gravenberch:
Onye midfielder bụ naanị 8 afọ mgbe ọ malitere igwu egwu na Zeeburgia. Ọ bụ na Zeeburgia na Ryan nwere uto mbụ ya na asọmpi asọmpi ma nwee obi ike ịtọ ntọala ya maka iwulite ọrụ na egwuregwu ahụ.
David Neres Child Story Plus Ihe Na-agbasaghị Ihe Echiche
N'oge na-adịghị anya Onye egwuregwu bọọlụ Dutch soro nwanne ya nwoke nke okenye - ụzọ nke Danzell - banye na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Ajax wee bido ọrụ ya ka ọ dị afọ 8.
Site na mmalite, Ryan nwere nkọwa doro anya nke ihe ọ chọrọ iji nweta na agụmakwụkwọ. O kpebiri imezu ha.
Eziokwu bụ, ndị na-eto eto Nka na ụzụ Dribbler nwere otu n'ime ọsọ ọsọ na-ebili site na klọb.
Zlatan Ibrahimovic nwata Akụkọ Plus na-enweghị isi akụkọ eziokwu
Ryan Gravenberch Biography - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Afọ asatọ ịrị elu ya na Ajax (kpomkwem 2018), Ryany ghọrọ otu n'ime ndị egwuregwu kachasị mma na De Toekomst.
N'ụzọ na-akpali mmasị, ọ bụ nwata mbụ natara “Abdelhak Nouri Trofee”Onyinye nke na-amata ikike kachasị ike na agụmakwụkwọ Ajax.
N'ụzọ na-akpali mmasị, ụbọchị onyinye ahụ hụkwara chi nke football na-agọzi ya n'ihu.
Ị maara?… otu ụbọchị ahụ, obi uto nke ndi nne na nna Ryan Gravenberch na ndi ezin’ulo ya amaghi oke dika ndi ha huru n’anya mechiri ulo oru mbu ya na Ajax. Nke a bụ nkọwa nke onyinye na nkwekọrịta nkwekọrịta.
Ryan Gravenberch Successga nke Ọma Akụkọ- Na-agbasa Ihe Ndekọ Ntorobịa:
Onye na-eto eto na-eto ngwa ngwa kpọrọ aha ọhụrụPaul Pogba”Mechara mee ka ọ bụrụ onye izizi mbụ ya, na-agbasa ndekọ mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ metụtara afọ.
Iji maa atụ, ọ ghọrọ onye nke ọdụdụ nwa n’ime akụkọ ntolite Eredivisie n’ime afọ 16 na ụbọchị 130. N'ikwu nke a, o mere ya na akwụkwọ akụkọ ihe mere eme dị ka onye na-eto eto nke kachasị na akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ọrụ ahụ.
Ọsọ ọsọ gaa n'oge edere akụkọ a na Ryan Gravenberch akụkọ nwata na akụkọ ndụ ya, onye na-eto eto na-atụ anya inwe otu mmetụta ahụ onyinye agụmakwụkwọ mbụ Frenkie de Jong na Matthijs de Ligt nwere.
O doro anya na ụwa na-achọ ịhụ ọzọ Paul Pogba na-eto eto n'ime onyinye nke ụwa - n'ihu anya anyị. Anyị nwere ebe a, vidiyo 2020 na ihe kpatara klọb kachasị elu na-arịọ maka mbinye aka Ryan.
O doro anya, ihe niile gbasara ya ọ dị ka Pogba, gị aha ya bụ Gravenberch na ọ bụ ọla nke Ajax. Ndị ọzọ, dị ka anyị na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Onye bụ Ryan Gravenberch mkpakọrịta nwoke na nwaanyị?
Ka ọ dị na Nọvemba 2020, ị gaghị ahụ foto nwa anyị nwoke na nwanyị. Mana anyị maara na ọ na-enwebu enyi nwanyị a na-akpọ Cindy.
Nna Ryan Gravenberch mere ngosi a na nyocha site na 2018 mgbe nwata ahụ dị nanị 16.
Ọ bụ ezie na enweghi mmelite ọ bụla banyere Cindy, anyị kwenyere na midfielder na-egwu kaadị mmekọrịta ya nso n'obi ya. Ọ ga-abụ oge tupu ị nweta ozi zuru oke gbasara ihe enyi nwanyị Ryan. Nọrọ na-ekiri!
Ryan Gravenberch Ndụ Ezinụlọ:
N'ihe banyere ịdị ukwuu egwuregwu, ụfọdụ ndị egwuregwu na-achọ idebe ya n'ụlọ ha. Ryany buru ibu na ezinụlọ ma na-akpọrọ ha ebe niile. N'ebe a, anyị ga-ewetara gị eziokwu gbasara ndị otu ya yana ụmụnne ya (nwanne) na ndị ikwu ya.
Banyere ndị nne na nna Ryan Gravenberch:
Mama nwanyị nke Midfield na-akpọ Aretha. N'ụzọ na-akpali mmasị, aha nna ya bụ Ryan Gravenberch Sr. Ma ndị nne na nna na-akwado nkwado na-egwuri egwu n'egwuregwu amateur dị ka ndị etiti.
You maara?… Ọ bụ mama ya Aretha onye si Amsterdam mgbe nna onye ọkpụkpọ ahụ tolitere na Rotterdam. Lee Ryan Gravenberch ya na ndị mụrụ ya ka ha na-eme nkwekọrịta nkwekọrịta ya.
Christian Eriksen Child Story Plus Ihe omuma nke ihe omuma
Na mgbakwunye, Ryan Gravenberch Sr nwere ezigbo akụkọ ihe mere eme na ngalaba FA nke otu n'ime ngalaba azụmaahịa ING, na Amsterdam Southeast. Ọ nọkwa na bọọdụ ịgba bọọlụ Zuidoost United dịka nke 2015.
Banyere Ryan Gravenberch Brothers:
Onyeisi a nwere ụmụnne abụọ jikọtara ya na bọọlụ. Nwanne nwoke nke okenye Ryan bụ Danzell Gravenberch bụkwa ọkachamara n'ịgba ọsọ, n'agbanyeghị na ọ nwere ọrụ na-enweghị atụ.
Dị ka Ryan, Danzell bụ ngwaahịa nke ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Ajax. Ugbu a, ọ na-etinye azụmaahịa ya na football na Sparta Rotterdam dị ka onye na-eti ihe.
Enwere nwanne nwanne Ryan Gravenberch nke amachaghị ma kọọkwa bọọlụ. Site na foto dị n'okpuru, ọ dị ka ọ bụ ọdụdụ nwa nke ezinụlọ Gravenberch. N'ikpeazụ, enwere obere ozi gbasara ịdị adị nwanne nwanyị.
Ryan Gravenberch na ụmụnne ya Danzell (n'aka nri).
Banyere ndị Ryan Gravenberch:
Wasntanetị na-emesapụ aka iji nye anyị titbit nke ozi gbasara ezinụlọ ndị etiti.
Otú ọ dị, ọ nweghị ndekọ banyere ezinụlọ ezinụlọ Ryan gbatịrị, karịsịa ka ọ metụtara nne na nna ya na nne na nna ya. N'otu aka ahụ, ọgụgụ isi nke bọl ka ga-ekpughe nwanne nna ya, nwanne nna ya, ụmụ nwanne nne ya, ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya.
Ryan Gravenberch Ndụ Nke Onwe:
E nwere nkwenye dị n'etiti ndị na-ede egwuregwu mgbe ọ bụla ha dere banyere ọdịnaya nke omume Ryan.
Ha kwenyere na ọ dị jụụ ma bụrụ onye a na-apụghị igbochi egbochi, ọbụna n'ọnọdụ kachasị njọ. Ọzọkwa, ọ bụ ezigbo onye na-ege ntị, ọ bụghị nnukwu ikwu okwu. Na mgbakwunye, bọọlụ bọọlụ achọghị ka ọ pụta ìhè.
Mgbe Ryan anaghị arụsi ọrụ ike, ịnwere ike ijide ya na-enwe ekele maka ọdịnaya dị egwu nke Dutch hop scene ma ọ bụ na-ele binge-Netflix.
Agbakwunyere na ndepụta nke ihe ndị na-amasị ya na ihe omume ntụrụndụ ya na ezinụlọ na ndị enyi na-etinye ezigbo oge, ịnya igwe na ebe igwu mmiri na-atụrụ ndụ.
Hụ onye chọtara ụzọ okike nke igwu mmiri.
Ndụ Ryan Gravenberch:
Banyere otu onye midfielder na-eme ma na-emefu ego ya, ọ na-akwụ ụgwọ nke ọma na ụgwọ na ụgwọ ọ na-enweta site na ịgba bọọlụ elu-elu.
N'ịbụ onye na-eto eto na atụmanya na-atọ ụtọ, o nwere ihe karịrị afọ iri nke nkwado na nkwado iji nwee ọ enjoyụ. Akụ ya, nke na-erughị otu nde dollar ga-arị elu na 2021.
Ihe niile na-akawanye mma na oge, na bọọlụ abụghị otu. N'ihi nke a, ọ gaghị abụ ihe ijuanya ma ọ bụrụ na Ryan na mberede amalite na-aga ụgbọ oloko dị ka Bugatti. You nwere ike ịchọpụta ụdị ụgbọ ala Ryan Gravenberch? mana ọ dị oke ọnụ, ọ dị mma?
N'ikpeazụ, ndị fans agaghị ekwupụta ihe ijuanya ọ bụrụ na ọ zụta ụlọ dị oke ọnụ. Anyị ahụla ma nụ maka ego na-enweghị isi na bọlbụ ma na-eche ma enwere ihe ọ bụla ọzọ nke nwere ike iju anyị anya banyere egwuregwu ahụ.
Eziokwu nke Ryan Gravenberch:
Iji mechie ihe odide a na nwata na akụkọ ndụ ya, ebe a bụ eziokwu amachaghị ma ọ bụ nke a na-akọwaghị banyere ya.
Eziokwu # 1 - rygwọ ọnwa na ụgwọ kwa sekọnd:
Nweta ego na Euro (€)
Kwa Afọ € 260,400
kwa ọnwa € 21,700
Kwa Izu € 5,000
Kwa .bọchị € 715
Kwa elekere € 30
Kwa Nkeji € 0.5
Kwa nke abụọ € 0.008
Anyị ejirila nlezianya tụlee nyocha nke ego ọ na-enweta ka elekere na-akụ. Hụ n’onwe gị ego ole ọ kpatarala kemgbe ị bịara ebe a.
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Ryan Gravenberch's Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Eziokwu # 2 - FIFA 2020 Ntụle:
Onye midfielder nwere nkwenye nke ihe 73 na ikike nke 88. Onu ogugu na-egosi na Ryan kwesiri itinye onu ahia karie ma oburu na o choro iru ebe 88 (nke XNUMX) N'Golo Kante.
Obi siri anyị ike na ọ ga-anapụta ndị mmadụ, karịchaa ebe ọ ka bụ nwata. Echefula, aha Ryan dị na ndepụta nke Squawka FIFA 20 wonderkids ịbanye na Ọnọdụ Ọrụ.
Ọ na-arụ ọrụ na-aga n'ihu.
Eziokwu # 3 - Ryan Gravenberch Okpukpe:
Ndị na - agba bọọlụ buru ibu n’ichebe mama ha etu ha si ele ihe metụtara okwukwe anya. Otú ọ dị, ọ dị mfe ịchọpụta ma ọ bụrụ na ha bụ ndị kwere ekwe.
Mụ na Ryan, anyị nwere obi ike na ọ bụ onye kwere ekwe. Agbanyeghị, anyị enweghị ike ịmata nke n'ime ọtụtụ okpukperechi ọ na-efe ofufe.
Eziokwu # 4 - Gini mere eji akpọ Ryan Contortionist?
Ọ bụ maka ebumnuche metụtara ụdị egwuregwu ya. Onye midfielder nwere ike ịmịchasị ma tụgharịa ebe niile, n'ihi ụkwụ ogologo ya na ọdịdị mara mma. Iji kwuo eziokwu, ọ ga-abụ ezigbo ọkpụkpọ.
Ọ maara otu esi agbagọ ma na-ehulata ahụ ya iji mezuo ebumnuche ya.
Daalụ maka ịgụ ihe mmụta a na akụkọ Ryan Gravenberch. Anyị nwere olile anya na ọ kpalitela gị ikwere na o nwebeghị onye toro eto iji nweta ịdị ukwuu. Dị nnọọ ka Ryan ghọrọ ihe kachasị mma na agụmakwụkwọ Ajax mgbe ọ dị afọ 16.
Ọ dị anyị mkpa ịja ndị nne na nna na ndị otu ezinụlọ obi maka nkwado ha na ọrụ ya n'okwu na omume. Taa, ha nwere obi ụtọ ịhụ ka onye na-elekọta ha na-ewulite ezinụlọ ha nke ịdị ukwuu egwuregwu.
Na lifebogger, anyị na-anya isi na ị na-enyefe akụkọ nwata yana akụkọ ndụ eziokwu na izi ezi. Ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla na-adịghị ele anya, kpọọ anyị ma ọ bụ hapụ ozi n'okpuru. Iji lee anya ngwa ngwa banyere ndụ Ryan Gravenberch, jiri nwayọ jiri nchịkọta okpokoro anyị.
Ihe omuma nke Wiki
Aha n'uju: Ryan Jiro Gravenberch
aha otutu: Ryani
Age: Afọ 19 na ọnwa 4
Ụbọchị ọmụmụ: Thbọchị 16 nke Mee 2002
Ebe amụrụ onye: Obodo Amsterdam na Netherlands
Ightkwụ dị elu: 6 ụkwụ, 3 sentimita asatọ
Ogologo na cm: 190.5 cm
Ọnọdụ egwuregwu: N’agbata etiti
Ndị nne na nna: Aretha (nne) Ryan Gravenberch sr (nna).
Ụmụnne: Denzel Gravenberch na nwanne nwoke ọzọ.
Nwa nwanyi: Cindy (asịrị)
Ihe omume: Igwu mmiri, ikiri ihe nkiri, ịge egwu, ịnya igwe.
Ezigbo Net: N'okpuru Nyocha
elu: 6 ụkwụ, 3 sentimita asatọ
Ndị na-egwu bọọlụ Polish
Arkadiusz Milik Akụkọ banyere nwatakịrị gbakwunyere ihe ndị mere na akụkọ ndụ ya
Ndị egwuregwu bọọlụ Moroccan
Hakim Ziyech Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
Nwere ike 6, 2021
Nwere ike 28, 2021